Imveliso yethambo elinye lamathambo enkukhu asuswe, yongeza i-1/4 anyanisi, izilayi ezi-2 zejinja, amacephe ama-2 okupheka iwayini, iqhekeza le-scallion emhlophe, cofa iiyure ezimbalwa embizeni, kwaye usebenzise ifolokhwe ukukhupha amaqatha enyama yethanga Umngxunya omncinci. Iipuni ze-2.1 zepowder emnyama, amacephe ama-2 okupheka iwayini, icephe e-1 yesosi yesosi ekhanyayo, amacephe ama-2 eewayini ebomvu, isiqingatha sepoyipuni yepepile emnyama entsha, amacephe ama-2 weoyster sauce, icephe elinye leswekile, ...
Iimbambo eziSwiti kunye neSour Spare (Iimbambo eziSwiti kunye neeSour Spare) sisitya esimelwe ngokwesiko elinencasa emnandi nenencasa. Isebenzisa iimbambo ezintsha zehagu njengesona sithako siphambili, inyama intsha kunye nethenda, kwaye umbala wesitya ogqityiweyo ubomvu kwaye uyakhazimla. "Iswiti kwaye imuncu" yincasa enazo zonke iicuisine eziphambili zaseTshayina. Iimbambo zehagu ezimnandi nezinencasa zivela eZhejiang kwaye isitya esiqhelekileyo saseZhejiang. Iimbambo zenyama yehagu emnandi neyomuncu zijolise ikakhulu kwiindlela nakwi ...
Intshayelelo yemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini obhaliso lwangaphandle e-China. Ukungeniswa kwempahla eluhlaza ikakhulu isuka eFrance, eSpain, eNetherlands imigaqo yesilayidi kunye nedayisi, nxiba umtya amanqaku Umlinganiso wamafutha ukuya kubhityile ngu-3: 7, utyebile kodwa awunamafutha. Faka isicelo kwisitishi Ukulungiselela ukutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina ugcino lwendawo engezantsi -18, Inkqubo yokuqandisa kwangoko. Inkqubo yokumisa i-CAS yindibaniselwano yedyn ...
Intshayelelo yemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini obhaliso lwangaphandle e-China. Izinto ezingenisiweyo ezivela kwamanye amazwe ikakhulu zivela eFrance, eSpain, eNetherlands, njl njl. Ukucaciswa okungakumbi, yamkela amanqaku esiko Umlinganiselo wamafutha ukutyeba ngu-3: 7, utyebile kodwa awunamafutha. Faka isicelo kwisitishi Ukulungiselela ukutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina Cryopreservation ngezantsi -18, inyama Frozen ibhekisa inyama exheliweyo, pre-c ...
Intshayelelo yemveliso Izinto zokwenza imveliso zivela kwiindawo zokuxhela kunye nakumashishini athumela ngaphandle abhaliswe e-China. Izinto zokungenisa elizweni ezingenisiweyo ikakhulu zivela eNew Zealand nase-Australia. Ukucaciswa okungakumbi, yamkela amanqaku esiko Faka isitishi Ifanelekile kulungiso lokutya, indawo yokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina ugcino lwendawo engezantsi -18, Inkqubo yokuqandisa kwangoko. Inkqubo yokumisa i-CAS yindibaniselwano yentsimbi enamandla kunye ne-static magnetic field, ...